Mpanamboatra sy mpamatsy an-doha - China Headphone Factory
FithEM KS-017 finday tsy misy tariby Bluetooth headphone type-c plug batterie dia afaka manohana headphone lalao manana fahaiza-manao lehibe
Ny bateria dia 110mAh afaka milalao Music 8-10 ora na mihoatra ny serivisy maharitra IPX5 CE, BIS ary andiany fanamarinana mifandraika dia afaka miantoka ny kalitaony. Earphone Center Control Neck Hang Place dia toerana bokotra mahitsizoro toerana dia fomba fahatsapana fihetseham-po bebe kokoa mahatonga ny fahatsapan'ny mpampiasa ny fikasihana malefaka sy mahazo aina kokoa ny fanaraha-maso foibe bokotra telo dia tsotra sy mora manampy fanalahidy dia mirindra ny hetsika lehibe roa dia mandroso ny hira, ny fihenan-danja efa milamina. Tsindrio roa dia hira mihemotra. Ny bokotra afovoany dia bokotra fiatoana rehefa mandeha ny mozika. Tsindrio roa no bokotra fanombohana.
FithEM KS-015 headphone tsy misy tariby dia manintona headphone mamaly haingana ny headphone Bluetooth
Ity ks-015 ity no kinova farany ato an-tranoko ary manana fiasan-kery haingana koa ny andraikitr'izy ireo mba hihaona bebe kokoa amin'ny filan'ny tsena, hanatsara ny toetran'ny vokatra ary ny filan'ny ankamaroan'ny mpividy.
FithEM KS-010 Wireless headphone Bluetooth tsy misy tomombana haingana dia haingana ny ODM style headphone
Product Material Fampidirana: Silica Gel fitaovana ao ambadiky ny vozona fehikibo earplug famolavolana artifisialy amin'ny sofina tena malefaka ary mampifanaraka ny sofina amin'ny Horn dia mety hahatratra ny vokatry ny fihenan'ny tabataba ara-batana aorian'ny fehin-kibo dia nanao fitsapana matihanina ho an'ny earphone koa IPX5 tena tsara earphone amin'ny ankapobeny dia volavolan-tsolika volamena. Misy earbuds telo tsiroaroa ampiarahina amin'ny sofina mahasoa ny mpampiasa hampitombo ny fahalianan'ny mpampiasa. Ny seranan-tsambo famandrihana TYPE-C farany.
Fithem ks-016 Wireless stereo neckband blueberry Chip 5.0 headphone fanatanjahantena
Fifaliana maivana sy malefaka tsy misy tariby. Ny tadin'ny Bluetooth tsy misy tariby Bluetooth headset tantera-drano IPx5 chip QCC3003 / 3024 na bateria roa BK3266 dia mety haharitra kokoa ny fotoana filalaovana. Izahay dia orinasa sy varotra orinasa manana fanamarinana vokatra toy ny CE sy mari-pahaizana hafa.
Fithem Ks-009SBlu Bluetooth lalao an-tariby tsy misy rano sy lohahevitra an-trano fialamboly
Ny fampifanarahana amina mozika mahafinaritra eo am-panazaran-tena dia mety hahatonga ny fampiharana tsy ho monotonous intsony. Misafidiana headset fanatanjahantena Bluetooth tsy misy tariby izay mahatonga anao hahazo aina kokoa, amin'izay ianao afaka mahatsapa fiainana milamina kokoa amin'ny fotoana fialan-tsasatrao, ary azonao atao ny manala ireo gadra ary mamoaka ny hatsembohanao amin'ny atin'ny fonao. Ny headset ara-panatanjahantena atolotra anio dia KS-009s, mba tsy ho monotonous ny fiainanao amin'ny fanatanjahan-tena.